NAMAKIA MAHAJANGA : ZANAK’ANABAVINA ZANDARY NALAINA AN-KERINY ARY NOVONOINALa dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarFiainam-pirenena MALAGASY PEJY MALAGASYNAMAKIA MAHAJANGA : ZANAK’ANABAVINA ZANDARY NALAINA AN-KERINY ARY NOVONOINA
NAMAKIA MAHAJANGA : ZANAK’ANABAVINA ZANDARY NALAINA AN-KERINY ARY NOVONOINA
Nogiazin’ireo olon-dratsy ary notaperin’izy ireo ny aina tovovavy iray tao Namakia Mahajanga, ny faran’ny herinandro teo. Ahiana ho valifaty no anton’izany.
Habibiana tsy roa aman-tany. Tovovavy 20 taona no lasibatry ny fakàna an-keriny sy vono mahatsiravina tao Namakia, ny faran’ny herinandro teo. Hafatra fohy miendrika fandrahonana no nalefan’ireo olon-dratsy tamin’ny alalan’ny finday tany amin’ny anadahin-dreniny, izay mpitandro ny filaminana. Izany no niantombohan’ny horohoro.
“Ny alakamisy alina no naharay ilay fandrahonanaa tamin’ny finday ilay zandary fa hisy haka ankeriny ilay zanak’anabaviny. Nampandre avy hatrany ireo mpiara-miasa aminy izy noho ny tahotra. Nivadika anefa ny toe-draharaha dimy minitra taorian’izay”, araka ny tatitry ny fiantombohan’ilay asan-jiolahy.
Namerina nandefa ilay “someso” indray mantsy ireo olona nitazona an-keriny, saingy nitaky vola 5 hetsy ariary, alefa amin’ilay laharana nampiasainy ihany. Nikoropaka sy nanahy mafy ny ain’ilay zanak’anabaviny ilay mpitandro ny filaminana ka tsy nihambahamba nanatanteraka ny fitakian’ireo jiolahy. Saingy tsy tapitra hatreo ny hevi-dratsin’ireo tsy mataho-tody fa mbola nibaiko ny tsy maintsy nandefasana vola 10 tapitrisa ariary indray. Ireo zandary anefa efa nanomboka nanao ny fikarohana izay olona nampiasa ilay laharana tamin’ny alalan’ny fanarahan-dia ny misy ilay karatra “SIM”. Ary tsy nitsahatra ny nifandray tamin’ireo mpaka an-keriny ireo fianakaviana.
Ny alahady, nody ventiny ny fikarohana nataon’ireo mpitandro ny filaminana taorian’izay ka fantatra ny toerana nisitrihan’ireo olon-dratsy, izay tao Namakia ihany. Telolahy izy ireo no fantatra fa tompon’antoka tamin’ity raharaha ity, saingy voatifitra ny iray rehefa nikasa ny nanohitra ireo mpitandro ny filaminana.
Nitohy tamin’ny fisavana ilay trano nisy azy ireo taorian’izay ny asan’ireo zandary ka vata-mangatsiakana tovovavy no efa hita nitsirara tamin’ny tany. Nilaza mihitsy aza ireo mpitandro ny filaminana ireo fa efa nosaritahan’ny alika ny vatan’ilay tsy manan-tsiny. Ny ampahan’ny famotorana natao tamin’ireo jiolahy mpaka an-keriny ireo moa no nilazan’izy ireo fa valifaty no anton’ity habibiana mamohetra ity. Saingy notanan’ireo mpanao fanadiahdiana tsiambaratelo ny anstipirihan’izany. Marihina fa taorian’ny fisamborana tao Namakia dia nentina niakatra tao Mahajanga ireo roalahy ireo ka nanomboka omaly ny famotorana. Aorian’izay vao hiatrika ny fampanoavana izy ireo.
Partager la publication "NAMAKIA MAHAJANGA : ZANAK’ANABAVINA ZANDARY NALAINA AN-KERINY ARY NOVONOINA"